नियमित अण्डा खाने बानी छ ? यो पढेपछि छोड्नु हुन्छ  Hamrosandesh.com
नियमित अण्डा खाने बानी छ ? यो पढेपछि छोड्नु हुन्छ
तपाइँ हामीले अण्डालाई शक्ति वर्द्धक खानेकुराको रुपमा सेवन गर्दै आएका छौं । बच्च बच्चीलाई समेत अण्डलाई पोषिलो खानेकुराकोरुपमा नियमित खुवाउने गरिन्छ ।
तर आज समम्म भएका अण्डा विषयक कुनै पनि अनुसन्धानले अण्डाले हाम्रो शरीरलाई हित गर्ने देखाएका छैनन् । महामारीकोरुपमा बढ्दो उच्च कोलेस्टोरलको समस्यालाई अण्डा आहारले झनै बढाउने सिद्ध भएको छ ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका बैज्ञानिक डाक्टर क्याथोडिन एवं डाक्टर जे. एमेनले गरेको शोध भन्छ-‘अण्डा सेवनले ब्लड प्रेसरको समस्या उब्जिन्छ । जुन एक दिन असाध्य मुटुरोगमा परिणत हुन सक्छ । पच्नलाई गरिष्ठ भोजन मानिने अण्डाले पेटलाई अस्त ब्यक्त बनाइदिन्छ, पत्थरी हुने सम्भावना बढाउँछ, र रगतमासीको समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यति मात्र होइन दिनै पिच्छे अण्डा खानेहरुला आमाशयको भित्री आवरण तथा रक्तबाहिनी नशाहरुमा घाउ हुन सक्छ।’
अण्डामा करिव ५०० देखि ६०० मिलिग्राम सम्म कोलेष्टोरलको मात्रा हुन्छ । अण्डाको कोलेस्टोरल हानीकारक र विषाक्त हुन्छ । उच्च मात्रामा कोलेस्टोरेल हुने अण्डालाई फ्राइ गरेर (वा अम्लेट बनाएर) खानु विषमाथि विष थप्नु बराबर हो ।
अण्डा कुखुराको महिनावारी
महिनावारीको क्रममा महिलाको योनीबाट निस्किने तरल पदार्थ जस्तै कुखुराको महिनावारीका क्रममा पनि त्यस्तै रस फूलकोरुपमा निस्किन्छ । मानिसमा जस्तै कुखुरा हासमा पनि माषिक चक्र हुन्छ । कुखुराको शरीरमा जम्मा भएको विकाश बाहिरिने प्रक्रियालाइ फुलोत्सर्जन भनिन्छ । अर्को भाषामा कुखुराको फूल महिनावारीको परिणाम हो । अझ ब्रोइलर बनाइएका कुखुराको फुल झनै हानीकारक हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा ब्रोइलर कुखुराको अण्डा सेवन गर्ने स्त्रीहरुमा स्तनको आकार सानो हुने सुत्केरी हुँदा दुध नआउने जस्ता समस्या समेत हुन्छन् । ब्रोइलर अण्डाले नपुंकषकता बढ्ने, महिलाको गर्भाषयमा क्यान्सर हुने खतरा उच्च हुने समेत शोधले देखाएको छ ।
आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. राजु अधिकारीको पुस्तक ‘खाने कसरी पिउने कसरी’ को पाठ्यांशमा आधारित ।